Ampidino lit it APK ho an'ny Android
Ampidino lit it
Ampidino lit it,
lit it game dia lalao simulation izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android.
Mila mampirehitra ny jiro ianao. Miezaha hiatrika anity asa lehibe nanendrena anao ity. Alefaso ny jiro sy ny jiro rehetra. Ny zava-dehibe dia ny fametrahana ny paikady mety ary handoro azy rehetra miaraka.
Ny zoro noforoninao dia tena zava-dehibe. Tsy misy olana rehefa kasaina hikasika ny takamoa rehetra. Fa raha mandrehitra iray na roa latsaka ianao dia hihena ny kintana. Raha te-hanangona kintana bebe kokoa ianao dia mila mandresy azy tsara indrindra.
Azoko antoka fa hahafinaritra be ianao aminity traikefa tsy manam-paharoa ity. Mety hahita zavatra tsy mbola niainanao ianao taloha. Hahafehy anao aorianny toko vitsivitsy ianao. Tena ankafizinny Gamers miaraka aminny gameplay azo ampiharina sy ny niainany tsy manam-petra. Izy io aza dia mivadika lalao tsy tianao apetraka. Raha te-ho anisanity lalao ity ianao dia azonao atao ny misintona ilay lalao maimaimpoana aminny findainao.